NS Malagasy Archive | NewsMada
ASIEF: efa miroso amin’ny fanomanana ny fifidianana
Par Taratra sur 02/12/2021 NS Malagasy, NS-Sports
Nanatanteraka fivoriambe, teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, omaly, ny Asief (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires). Nisy ny tatitra ara-teknika, ara-moraly, ara-bola ary ny fanomanana ny fifidianana. Fantatra nandritra izany fa efa miroso amin’ny fanomanana ny fifidianana ny Asief amin’izao fotoana izao, satria ho tapitra tsy ho ela ny fotoam-pitantanan’ny birao ankehitriny izay tarihin’Andrianarison […]
Karate-Fihezama 2021: nandravarava ny Kokaju sy ny Akka
Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tetsy amin’ny kianja mitafo Mahamasina, ny fifaninanam-pirenena Fihezama, taranja karate, ho an’ny taom-pikatrohana 2021. Ny sokajy katitakely (pupiles,poussins,minimes,benjamins) ny nifaninana nandritra izany, ka mpikatroka manodidina ny 500 avy amin’ny klioba 30 manerana ny faritra Analamanga ny tonga nandray anjara. Raha ny voka-dalao, nandravarava ny klioban’ny Kokaju, izay nahazo medaly […]
Billard – “Blackball Time Limit Challenge”: lasan’i Ramesy ny lelavola 2 500 000 Ar
Tontosa ny asabotsy 27 sy ny alahady 28 novambra lasa teo, tao amin’ny In Square Ambatobe, ny “Tournoi Blackball Time Limit Challenge”, taranja billard, nokarakarain’ny klioba In Square Billard Club (ISBC). Nandrombaka ny laharana voalohany, ka nibata ny amboara sy fanomezana ary ny lelavola 2 500 000 Ar i Ramesy. Faharoa i Tax mpilalaon’ny ATMO, nahazo amboara […]
Fiahiana ara-tsosialy taona 2022: voavolavola ny teti-pandaminana
Par Taratra sur 02/12/2021 Divers, NS Malagasy
Nandritra ny herinandro ny atrikasa nataon’ny minisiteran’ny Mponina izay mifandraika amin’ny fiahiana ara-tsosialy teto Toamasina izay nifarana ny asabotsy lasa teo. Nandray anjara ireo mpizaika avy amin’ny faritra 23 eto amin’ny Nosy. Nambaran’ny tale jeneralin’ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina, Rivomanana Ghisbert, fa anisan’ny nodinihina ary nasiana fanatsarana ny fijerena akaiky ny haraton’ aina […]
Fandraisana an-tanana isam-pokontany: mikirakira fitaovana 30 ny mpanentana ara-pahasalamana
Mikirakira fitaovam-panentanana 30 eo ho eo ny mpanentana ara-pahasalamana rehefa miasa, fitaovana mirakitra ny hafatra sy ny antontan-kevitra momba ny aretina samihafa azon’izy ireo raisina an-tanana, araka ny fanadihadiana. Mety tsy hampahomby ny fandraisana an-tanana ny fahamaroan’ny antontan-kevitra eo am-pelatanan’ny mpanentana ara-pahasalamana ka nijery fomba handrindrana ny asa tokony hofehezin’izy ireo ny tomponandraikitra. Misy fivoriana […]
Fanohanan’ny CUA ireo tanora: marobe ireo tolotrasa homen’ny « Forum Asaniarivo »
Par Taratra sur 02/12/2021 Faits Divers, NS Malagasy
Hosantarina eny amin’ny boriborintany faharoa, ny 17 sy 18 desambra izao, eny amin’ny Esplanade Ankatso ny hetsika « Forum Asaniarivo ». Mikarakara izany ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tanora manodidina ny 3.800 no heverina ho tonga hanatrika ireo roa andro ireo. Fiaraha-miasan’ny CUA sy ireo orinasa marobe mpiara-miombon’antoka eto Antananarivo ity “Forum Asaniarivo” ity. Tanjona ny fitsinjovana manokana […]
Fanehoan-kevitra mialoha ny fifidianana: maro ireo mitaky ny hanerenan’ny Ceni ny lesoka
Par Taratra sur 02/12/2021 NS Malagasy, NS-Politique
Nahitsy ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena, ny depiote Razafintsiandraofa Brunelle amin’ny fanehoan-keviny amin’izao fijoroan’ny Ceni vaovao izao. Nambarany fa tokony hitantana fifidianana milamina sy ekenan’ny rehetra ny birao. “Ilaina sahy mijoro ny filohany. Tokony hahitsy sy tsy mitanila amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny Ceni ary afaka hijoro amin’ny fahamarinana. Tokony hohenoina ireo tsikera sy ary ahitsy […]
Fitantanana ny fifidianana: nampanantena ny tsy hahatara ny lisi-pifidianana ny Ceni
Tsy ankiandriandry ary nanome toky. Ho fantatra ato anatin’ny telo andro ny birao handrafitra ny eo anivon’ny Ceni vaovao, taorian’ny nanaovan’ireo mpikambana miisa sivy ny fianianany, omaly, tetsy Anosy. “Hanomboka anio, (omaly) avy hatrany ny fivorianay. Ho hita eo ny ho tohiny sy ny fandaminana ankapobeny. Hiasa avy hatrany izahay aorian’izany ka tsy ho tara […]
Fitarainana noho ny fihetsiky ny depiote…: Ambivitra ny tsy nifandonan’ny zandary sy ny fokonolona
Nivaha ihany ny olana rehefa niditra an-tsehatra i Monja Roindefo. Afaka nihazo ny aty Antananarivo ihany ireo solontenam-pokonolona any Bekily, hitaraina manoloana ny fihetsiky ny depiote any an-toerana sy ny ben’ny Tanàna. Niteraka savorovoro tany an-toerana tamin’ity herinandro ity ny nisamboran’ny zandary ireo solontenan’ny mponina avy any Tanambao Tsirandragne, raha nikasa haka taxi-brousse hiakatra aty […]
Fifanatrehana eny amin’ny CCI Ivato: nametraka fepetra amin’ny governemanta ireo depiote
Hafampana indray ny fifanatrehana ary tsy ho eny Tsimbazaza fa hiova toerana. Hotanterahina anio sy rahampitso, eny amin’ny CCI Ivato ny fametraham-panontanian’ireo depiote amin’ireo mpikamban’ny governemanta. Nivory nanomana izanyfihaonana izany teny Tsimbazaza, afakomaly ireo solombavam-bahoaka. Anisan’ny fepetra napetrak’izy ireo ny amin’ny tsy maintsy hanatrehan’ilay minisitra voakasiky ny fanontaniana ny fihaonana. “Tokony handamina ny fandaharam-potoany avokoa […]
Namearison Robert : “Mila atao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy”
Vola desambara izao. Efa tokony handeha ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy. Mby aiza? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, i Namearison Robert. “Mila atao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana marina ny amin’ny fanavaozana lisitry ny mpifidy izay vao namoahanareo fanambarana farany teo? I Namearison […]
Par Taratra sur 02/12/2021 En Bref, NS Malagasy
Notanterahina, omaly, tetsy amin’ny Parvis Analakely ny hetsika fanamarihana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny aretina VIH/Sida. Nisy ny fitiliana maimaim-poana natao ho an’ireo liana te hahafantatra ny fahasalamany. Eto Madagasikara, 0,28% ny tahan’ny olona mitondra ny aretina. Ambany izany raha oharina amin’ny firenena afikanina hafa. Na izany aza, misy hatrany ny olona vaovao voatily fa […]
CUA-WSUP: notolorana fitaovana ireo Inspecteurs d’hygiène
Mpiara-miombon’antoka mahafatra-po amin’ny sehatry ny fahadiovana sy ny fidiovana eo amin’ny kaominina Antananarivo ny WSUP. Omaly, nanolotra fitaovana ho an’ireo Inspecteur d’hygiène ao amin’ny fitaleavana misahana ny rano, fahadiovana, fidiovana ao amin’ny CUA izy ireo. Nahitana fanamiana toy ny polos, gilets miisa 68 ary satrokety miisa 34 tamin’izany fitaovana izany. Tanjon’izao fanampiana izao ny fanatanterahana […]
Vakodrazana: manandratra ny antsa sakalava i Jec Man Dr Kely
Par Taratra sur 02/12/2021 NS Malagasy, NS-Culture
Herson no tena anaran’ity mpanakanto zanaky ny kaominina Ambakireny, distrikan’i Tsaratanana ity. Ankoatra ny maha mpanakanto azy, mpitsabo i Jec Man Dr Kely. Taona 2019, nijoro ny tarika Jec man Dr Kely, izay manompana ny sehatrasan’izy ireo ho amin’ny fampahafantarana sy fanadratana ary fametrahana amin’ny toerana mendrika sy sahaza azy ny vakodrazana sakalava toy ny […]
Miss&Mister TBF Madagascar: hiditra amin’ny dingan’ny manasa-dalana
Hotanterahina etsy amin’ny Le Jardin By Pass indray ny manasa-dalana amin’ilay fifaninanana “Miss et mister Teen Beauty Fashion Madagascar 4 ème édition” karakarain’ny Ykyre agency. Hotontosaina ny alahady 5 desambra izao manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Mizara roa miavaka ny seho. Fanehoana sy fanasongadinana ny fitafy malagasy. Faharoa, latro manokana amin’ny “tenue de plage” na […]
Plaza Ampefiloha: hampiara-peo i Dama sy i Farakely
Fiarahana an-tsehatra anisan’ny be mpiandry indrindra amin’ity faramparan’ny taona ity, ny an’i Dama sy i Farakely. “Farakely”. Hiram-pitiavana anisan’ireo noforonin’i Dama, izay nanamarika tantaran’ny mpankafy maro ihany koa. “Niainga tamin’io hira io ny nampitsiry ny hevitra, ka naharaikitra an’ity fampiaraham-peo ity”, hoy ny nambaran’i Jack Thierry, tompon’andraikitry ny Eto Studio. Izy ireo no mandray an-tanana […]
Toamasina: voa mafy ireo mpanangona letisia
Par Taratra sur 02/12/2021 Economie, NS Malagasy
Vita ny fanondranana letisia mankany Eoropa. Ireo mpanondrana any amin’ny tany Arabo, Azia ary Amerika Atsimo sisa no manangona, saingy vitsy. Eo koa ireo orinasa mpanodina voankazo, letisia atao kaonfitiora na anaty boaty na zava-pisotro. Nambaran’ny mpanangom-bokatra sendra anay, fa voa mafy izy ireo tamin’ity taom-piotazana 2021 ity. Tsy voahaja ny fepetra napetraky ny fanjakana […]
Fandaharanasa GoTeach DHL: tanora mahazo tohana ara-bola sy fitaovana
Hatramin’ny volana jona 2021, tanora 150 avy any Antsirabe, Toamasina, Antananarivo, nanaraka fiofanana momba ny fandraharahana miaraka amin’ny DHL GoTeach. Ny hanoro hevitra ireo tanora ireo amin’ny fandraharahana azo antoka sy haharitra. 50 isaky ny tanàna aloha tany am-boalohany, avy eo 25 nofantenana, ary 15 sisa na dimy isaky ny tanàna. Nahazo fanohanana ara-bola sy […]
Mikatona ny fotoam-panjonoana: tsy azo amidy ny drakaka
Nogiazana ireo drakaka namidy teny an-tsena teto Antananarivo, ary toraka izany koa ny hena sokadranomasina na fano, tany Mananjary Maro ny fandikan-dalàna amin’ny sehatry ny jono sy ny hazan-dranomasina. Nidina ifotony, nanao fitsirihana tampoka teny amin’ny tsenan’Analakely sy Isotry ny inspektera ao amin’ny Foibe mpanara-maso ny jono (CSP), ny zoma 26 novambra teo. Nahatratra 200 […]
Fifofoana ny ain’ny filoham-pirenena: takin’ny Me Olala halefa TVM/RNM ny fitsarana ny « Apollo 21 »
Mbola nanamafy indray. Takin’ny mpisolovava, ny Me Olala, ny hampitana mivantana amin’ny haino aman-jerin’ny fanjakana (TVM-RNM) ny ho fizotran’ny fitsarana ny « Raharaha Apollo 21 », hatao ny 6 desambra izao. « Tokony hangarahara tanteraka ary ho hitan’ny vahoaka malagasy ny ho fizotran’ny fitsarana. Tantara hipetraka eo amin’ny firenena io fikasana hamono ny filoham-pirenena sy ny mpitondra ambony […]
Hetsika fiaraha-mifaly: hatao etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny « Krismasy n’aka »
Hiova endrika sy toerana amin’ity indray mandeha ity. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny fiadidina ny Repoblika, tamin’ity herinandro ity fa hotanterahina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny « Krismasy n’aka 2021 ». Tafiditra amin’ny fiaraha-mifaly sy hanamarihanta miaraka ny fetin’ny Noely 2021 izany. Hanomboka ny 10 ka hatramin’ny 29 desambra izao izany. Ahitana hetsika samihafa sy tranoheva ary […]
Par Taratra sur 02/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy ny mandrimandry manana aretina amin’izao? Tsy inona fa ny fanaovan’ny valanaretina Covid-19 tampody fohy, efa mila hirongatra aza amin’ny faritra sasany. Nefa misy ihany ny tsy mahalala? Na tsy maharaka, na tsy miraharaha… Tsy hita hovisavisaina sy hotanisaisaina intsony amin’izany ny tsy fanarahana fepatra sakana ara-pahasalamana eny rehetra eny: an-dalambe, an-tsena, anaty fiara… Tsy […]
Par Taratra sur 02/12/2021 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Tao anatin’ny indray alina monja, fanafihan-jiolahy mitam-piadiana roa no indray nitranga, teny Ankaraobato. Raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy, vokatr’izany, tao amin’ny fokontanin’ Ifarihy. Nisesisesy ny fanafihan-jiolahy teny Ankaraobato, omaly. Isan’ny tranga nahafatesan’olona, ilay niseho tao amin’ny fokontanin’Ifarihy, omaly tokony ho tamin’ny 01 ora maraina. Niditra an-keriny tao amin’ireo tompon-trano ireo andian-jiolahy nirongo basy vita […]
Votsotra ireo roa lahy voalaza fa namono nanao herisetra tamin’ireo telo mianaka teny Ambodmita ny alahady teo. Mitaraina mafy ireo niham-boina ary mangataka ny hampiharana ny lalàna velona mahakasika ny raharaha. Manaitra ny fitondram-panjakana koa hijery ny zava-misy. Tsiahivina fa niharan’ny herisetran’ireto lehilahy ireto ireo telo mianaka nandeha moto. Voadarok’izy ireo koa ny lehilahy niaro […]
Fakana an-keriny ankizilahikely: tratra ireo fianakaviana nahavanon-doza
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava, ny asabotsy teo, ireo jiolahy naka an-keriny ankizilahy vao enin-taona. Isan’ireo olona efatra tratra amin’izany ny lehilahy iray fiakavian’ity nalaina an-keriny ity. Tratra niaraka tamin’ireo mpiray tsikombakomba taminy tany Ambositra izy sy ireo nampiantrano azy. Tsiahivina fa nalaina an-keriny teo am-pilalaovana teo an-tokotaniny eny Ankaraobato […]
1 2 3 … 1 821 Suivant »